Teori Pärm 4
Waxaad soo qaadaysaa qof rakaab ah, Ma kuu bannaantahay inaad u istaagtid sida darawalka gaarigan oo kale?
haa, laakiin ugu badnaan 1 daqiiqo
haa, maadaama ay wadadu ciriiri tahay
Haa, Haddii ay sidaas u sahlayso baabuurta kale inay i dhaafaan
Maalin iyada oo bisha maarso lagu jiro oo cimiladuna tahay sida masawirka ku sawiran baad waxaad soo deynsatay gaadiid gaar ahaaneed. Marka aad sameyneysid kontroolka amaanka baabuurka baad waxaad aragtay in uu baaburku haysto taayarada barafka oo leh calaamadda M+S. Gunta taayarada gadaale waa 4mm, gunta taayarada horana waa 2 mm. Miyay kuu banaantahay in aad baabuurkaas wadid
Haa, laakiin waxaan ku wadi karaa meel dhismo leh (tätort) oo kaliya
Haa, maadaama ay gunta taayarada gadaale ugu badantahay
Qofkee kamid ah dadkaan ayaa si sahlan lo bedeli karaa ra'yigiisa marka u gaariga wado (grupptryck)?
Qofka leh isku kalsooni liidata
Qofka leh isku kalsooni fiican
Qofka leh waaya aragnimo dheer xagga wadida gawaarida
Maalmehee asbuuca ayuu xawaaraha ama xawliga ugu sareeya ee wadadu yahay 30 km/tim. Marka la fiiriyo calaamadaan wadada?
Maalmaha shaqada oo laga reebay maalinta ka horaysa axada ama maalin kale oo fasax
Qaabka waditaankaagu saamayn maku leeyahay taayarka gaariga dhamaadkiisa?
Haa, Haddii aan xoog u leewariyo ama u sheelareeyo iyo bareega badan waxay kordhiyaan dhamaadka taayarka
Haa, hadii aan xawli ama xawaare sareeya ku kaxeeyo, taayiradu waa kaa dhamaad yar yihiin marka aan xawli ama xawaare hooseeya ku socda
Macnehee calaamadan adiga kuu leedahay?
Horay waan u sii wadi karaa hadii aan rabo inaan ku baarkimo oo kaliya
Calaadaan wixii ka dambeeya xawaaraha ugu badan ee la oggolyahay waa 30 km/tim
Calaamadaan wixii ka dambeeya waxaa i saaran waajibka ka leexashada basaska oo dhan
La iima oggola inaan horay ama toos u sii wado gaariga
Waxaad buudhi daboolan ku raraysaa shay culus meel dhismo badan leh dhexdeed, Ma loo baahan yahay inaad rarka ama shayga culus xirtid?
Haa, waa inaan mar walba xiro
Maya, maadaama shayga culusi uu sugan yahay oo uusan dhaqdhaqaaqayn
Maya, maadama buudhigu daboolan yahay
Maya, maadaama aan ku wadayo meel dhismo badan leh
Xaaladahan mid kamid ah ma la oggolyahay inaad baabuur kale dhaaftid
Haa, laakiin xaaladda D oo kaliya
Warbixintee ayay wadada kaa siinaysaa calaamadaan wadada?
Waxaan ku soo dhawaaday meel dadku wadada ka jaraan oo leh laydh ama ishaaro.
Meeshan waxaa sida badan jooga dad curyaamiin ah oo kursiga curyaanka ku socda
Meeshaan sida badan waxaa jooga ama ku sugan caruur maqlkoodu ama aragoodu hooseeyo
Waxaan usoo dhawaaday meel ay dadku wadada ka jaraan oo aan la ilaalinayn iskuul agtiis
Bishu waa september, waxaa bilawday baraf u da'aya si xoog leh, cimiladuna waa qabaw oo waa maynis oo barafkii da'ay dhulka ayuu yaallaa. Maku wadan kartaa gaadhiga taayirada masaamiirta leh?
Haa, hadii aan rukhsad ka haysto booliska
Haa, hadii aan rukhsad ka haysto hey'adda wadooyinka
Haa, maadaama wadada baraf ka jiro
Waxaad ku wadaa waddo-baadiye. Ambalaas ayaa xagga dambe kaaga timid, Goorma ayay tahay inaad wadada u banaysid?
Marka uu u shidan yahay nalal wareegaya buluug ah ama uu u shidanyahay qaylada (sawaxanka) ambalaasta.
Marka uu yahay xawaaraha waddada ee la oggolyahay 70 km/tim ama ka yar oo kaliya
Marka ay waddadu leedahay labo haad/seed iyo wax ka badan oo kaliya
Adigoo u socda Nyköping ayaad waxaad aragtay in waddadu ay u xidhantahay dhisme dartiis. Tabeelehee ayaa lagu dhajiyaa oo tusaya waddo aadaysa Nyköping?
Maxaa ugu muhiimsan oo aad samayn kartaa ka darawal ahaan si ay khatarta shilku u noqoto inta ugu yar ee suurtagal ah?
Inaan mar walba ku baraarugsanaado calaamadaha iyo sumadaha waddada
Inaan raaco hab u socodka taraafiga oo aragga ku hayo meel hore oo waddada ah
Inaan xawaaraha ama xawliga waafajiyo hadba xaaladda, oo aan mar walboo aan gaari wadayo aan ahaadaa saaxi (mid aan cabsanayn) oo nastay
Inaan dayactiro gaariga si joogto ah oo aan ku wadaa taayaro sharciga waafaqsan
Waxaad isgoyskan u leexan doontaa dhinaca midig, Waxaa kaa dambeeya dhawr baabuur ah. Xaggee baa habboon inaad gaariga k kaxaysid?
Meel u dhaw xarriiqda geeska
Waddada geeskeeda (vägren)
Maxaa dhacay oo aan loo oggolayn in lagu kaxeeyo waddada baabuur sidaan u eg?
Waxaan loo oggolayn sababo ay ka mid tahay in barafka gaariga dul saaran inuu soo daadan karo oo khatar u keeni karo ruux kale
Barafku wuu dhagaxoobi karaa oo keeni karaa in baabuurku si wacan u shaqayn waayo
Gaarigu wuxuu cabayaa shidaal dheeraad ah maadaama uu barafka kor saarani uu dib u caabinayo